भाजपा सांसदको अपिल : ५ पल्ट हनुमान चालिसा पढ्नूस् कोरोना भाग्छ ! - Himali Patrika
भाजपा सांसदको अपिल : ५ पल्ट हनुमान चालिसा पढ्नूस् कोरोना भाग्छ !
हिमाली पत्रिका १४ साउन २०७७, 6:44 am
नयाँदिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरस महामारी झन् जटिल बन्दै गएको बेला भारतीय सत्तारुढ दलका नेताहरुले एकपछि अर्को गलत र झुटा प्रचारवाजी गर्न थालेका छन् ।
भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ तथा सांसद प्रज्ञा ठाकुरले हालै जनतालाई हनुमान चालिसा पढेर प्रार्थना गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले अगस्ट ५ सम्म हरेक दिन पाँच पटक हनुमान चालिसा पढ्न आग्रह गरेकी हुन् ।
जसले गर्दा कोरोना महामारी अन्त्य हुने उनको जिकिर छ । ‘कोरोनाभाइरस महामारीबाट विश्वलाई छुटकारा’ भन्दै प्रार्थना गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् ।
‘आउनूस्, हामी सबै मिलेर जनताको सुस्वास्थ्य र कोरोनाभाइरस अन्त्यका लागि हनुमान चालिसा पाँच पटक पढ्दै आध्यात्मिक पहल गरौँ,’ सांसद ठाकुरले भनेकी छन् ।
‘जब जनताले, देशसँगै विश्वभरका हिन्दूले एकै स्वरमा हनुमान चालिसा पढ्छन्, यसले पक्कै काम गर्नेछ । र हामी कोरोनाभाइरसबाट मुक्त हुनेछौँ । यो रामसँग तपाईँको प्रार्थना हुनेछ,’ सांसद ठाकुरले भनेकी छन् ।